Myanmar Search Engine - Reference Design
Metrics (Precision, Recall, F-score)
HITS algorithm… Continue
Added by Tun on July 31, 2009 at 1:30am —
Zawgyi ဖွန့်ကို Unicode 5.1 အနေနှင့် မြင်ချင်လှပါတယ် ဆိုသူများအတွက် ၅ စက္ကန့် Guide :P
Myanmar3, Padauk, Parabaik, စသောဖွန့်များကို ဥပမာ FontForge ဖြင့်ဖွင့်ပါ။
ပြီးပါပြီး။ ဟောသလို Confirm လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ယူနီကုတ် ၅.၁ဟုတ်မဟုတ် သေချာအောင် Myanmar NLP ဆိုတာတောင် ပါသေး။…
Added by Mark on July 28, 2009 at 1:30pm —
LinkScanner အလကားပေးလို့ AVG အကြောင်း ရေးမိပါတယ်။ ထပ်တွေ့ရတဲ့ သတင်းကြောင့် သက်ပြင်းသာချိမိပါတော့တယ်။ သတင်းကဒီလို…. Slasdot.org ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ ရေးသားဖော်ပြထားမှုအရ AVG anti-virus softwareရဲ့ update virus definitionဟာ iTunesကို malwareအဖြစ် detect တွေ့ရှိခဲ့လို့ iTunes usersတွေ အလုပ်ရှုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ AVG anti-virus definition updateဟာ iTunes.dllနဲ့ iTunesRegistry.dll ဖိုင်တွေကို… Continue
Added by kjohn on July 27, 2009 at 5:36pm —
အင်တာနက်ထဲက ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါင်း (၂)သန်းခန့်ဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ လျှို့ဝှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ခံနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေထဲက (၆၀)ရာခိုင်နှုန်းဟာ ရပ်ဆိုင်းသွားခြင်း (သို့မဟုတ်) တိုက်ခိုက်သူတွေ ရောက်စေချင်တဲ့ တခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ရောက်သွားခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံထားရတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကို ဖွင့်ကြည့်မိတဲ့ အင်တာနက်သုံးစွဲသူ တစ်ဦးအနေနဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရှိတဲ့ မည်သည့်အရာကိုမျှ clickနှိပ်ကြည့်ရှုခြင်း မပြုပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်တွေ (personal… Continue
Added by kjohn on July 27, 2009 at 5:20pm —
No Comments User တစ်ယောက် မြင်သမျှ မြန်မာUnicode သမိုင်း
ကျနော် Unicode ကို စိတ်ဝင်စားတယ်။ Programmer တစ်ယောက် သူ့ Program ထဲမှာ ထည့်သုံးဖို့လောက်ပဲ စိတ်ဝင်စားတာပါ။ အခု လုပ်ကိုင် ငြင်းခုံနေကြတဲ့ Experts တွေလို မသိနားမလည်ပါဘူး။ မသိရင် Shut Up ဆိုတော့ မအော်လိုက်ပါနဲ့။ User တစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်ကို ပြောပြချင်ရုံသက်သက်ပါ။ ဒါလေးက ကျနော်မှတ်မိသမျှ မြန်မာUnicode သမိုင်းပါ။ ခုနှစ် ရက်စွဲတွေ မမှတ်မိလို့ နံပါတ်တပ်ပြီးရေးပါတယ်။
၁။ Unicode၊ Unicode ဆိုပြီး အသံတွေ စကြားလာရတယ်။ Workshops တွေလုပ်ကြတာ တက်လိုက်ရသေးတယ်။ CE ကလုပ်တာလည်း တော်တော်… Continue
Added by Kyaw Zaw on July 26, 2009 at 9:30pm —
No Comments MIT ဆရာပူဇော်ပွဲ
http://www.mit2009.co.cc Added by Okisan on July 21, 2009 at 5:39pm —
SEO and Analytics, The Grey and the hard numbers
WhataSearch Engine Sees
Spamming and other no-nos
I would like to thank Chin Yong(my colleague from SSPEC)SEO & Analytics.ppt… Continue
Added by MELODYMAUNG on July 21, 2009 at 9:25am —
No Comments My Birthday to 20 Day!
Added by manawphyulay on July 19, 2009 at 7:41pm —
ပြည့်စုံတို.ဘ၀က မွေးကတည်းက အချိန်အထိကို ကောင်းကွက်တွေရှားခဲ့တာ။ အနေအထိုင်မတက်လို. လူတွေ ရွံရှာခဲ့ပေါင်းလည်းမနဲဘူး။ ပညာမတက် ဂုဏ်မရှိ၊ ငွေမရှိမို. လူတိုင်းက တံတွေးနဲ.အထွေးခံခဲ့ရတဲ့ ဘ၀မျိုးကို ပြန်မလိုချင်တော့ဘူး။ အိပ်ချိန်တွေ စားချိန်တွေက ဘယ်အရေးကြီးလို.လဲ။ ငါ့ကိုယ်ငါ မချစ်ချင်တော့ဘူး။ စနက်တံတစ်ခုလိုပေါက်ထွက်ဖို.လည်း၊ ငါမှာ ရမ်းစက မရှိ။ ငါဟာဘာလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်တယ် ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည်မှာ မနေချင်ဘူး။ အိမ်မက်တွေမက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ကူးတွေယဉ်တွေနဲ.ရူးနေတာ။ မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့ဘက်က… Continue
Added by ပြည့်စုံ on July 15, 2009 at 12:13am —
[http://www.haious.org] First of all things, we'd like to makeatechnical site for everyone, who want to know and use or study either partly or wholly about with computer theory. So, we made decision to announce the Haious Organization for everyone else. Our site is notabusiness site as well as policy site, we only aim to technological site to our Haious Organization. Haious Organization includes many services that can be used easily for you and your friends. Using Haious Organization… Continue
Added by SkipSoft on July 14, 2009 at 11:12pm —
No Comments ကူညီပါအုံးဗျာ
ကျွန်တော် Linux နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေလိုချင်လို့ပါ။ အကိုတို့မှာရှိတယ်ဆိုရင်မျှပါအုံးနော်. ။ အရမ်းစိတ်ဝင်းစားလို့ပါနော်.။ ကူညီပေးပါအုံးတစ်ခါလောက်တော့။ Added by Thiha Soe on July 14, 2009 at 11:59am —
Java မှတျစု: ကြှနျတျောသိတဲ့ Database အကွောငျး
ဒီတဈခါတော့ကြှနျတျောသိသလောကျ၊ မှတျသလောကျတှထေဲက database အကွောငျ:နဲ့ပတျသကျပွီးဖျောပွလိုကျပါတယျ။ လိုအပျတာ မြား၊ အကွံပွုစရာမြားရှိပါက comment မြားရေးသားဖျောပွနိုငျပါတယျ။ကြှနျတျောသိတဲ့ Database အကွောငျး၁။ Database ဆိုသညျမှာDatabase ဆိုတာအလှယျပွောရရငျအခကျြအလကျ (data) တှရေဲ့အစုအဝေးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့အခကျြအလကျတှကေို　စညျးကမျးမဲ့စုခငျြသလိုစုထားတာတော့မဟုတျပါဘူး။ ရှာဖှခွေငျး၊ ခှဲခွမျးစိတျဖွာခွငျးတို့ကိုရညျရှယျ၍စနဈတကသြိမျးဆညျးထားတဲ့ data အခကျြ အလကျအစုအဝေးကို Database… Continue
Added by Aung Ko Ko Phyo on July 13, 2009 at 6:00pm —
No Comments Iterative Deepening Depth-first Search (ITDDFS)
Added by Hinino on July 4, 2009 at 3:00am —
No Comments Java မှတျစု: String စာကွောငျးမြားမှရှာလိုသောအခကျြအလကျ မြားကို Regular Expression ကိုသုံး၍ ရှာခွငျး
ဒီ blog ကိုမရေးခငျ ကြှနျတျောသညျ Java beginner တဈယောကျသာဖွဈကွောငျးကွိုတငျပွောထားပါရစေ။ ဒါ့ကွောငျ့လိုအပျတာမြား၊ အကွံပွုဆှေးနှေးစရာမြားရှိပါက comment မြားရေးသားဖျောပွနိုငျပါတယျ။String စာကွောငျးမြားမှရှာလိုသောအခကျြအလကျမြားကို Regular Expression ကိုသုံး၍ ရှာခွငျးFormat အတိအကမြရှိသော String data (စာကွောငျး data) မြားမှအခကျြ အလကျအစိတျအပိုငျးမြားကိုရယူရနျအတှကျ Regular Expression ကိုအသုံးပွုနိုငျပါတယျ။ Regular Expression ဆိုသညျမှာရှာလိုသောအခကျြအလကျမြားကိုသငျ့လြျောသော ပုံစံ… Continue
Added by Aung Ko Ko Phyo on July 3, 2009 at 6:00pm —
ဒီကိုလာခဲ့ ပါ။ IT နည်းများကိုအတက်နိုင်ဆုံးshare ပေးထားပါတယ်။
မေးခွန်းနဲ အကြံပေးချက်များကိုလည်း ရေးခဲနိုင်ပါတယ်။ www.sbsangpi.co.cc
ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Added by SB Sangpi on July 2, 2009 at 3:53pm —
ကွန်ပျူတာပိုမိုမြန်ဆန်သွက်လက်လာစေ ရန် HD freeing up ပြုလုပ်ခြင်း jQuery if else သင်ခန်းစာ
jQuery .slideToggle() tutorials
jQuery သင်ခန်းစာ ၀၂
jQuery အခြေခံ သင်ခန်းစာ ၀၁
business channel partnership
Images from Myanmar IT Pros Gathering
2013July (1)April (3)March (4)February (6)January (11)2012December (3)November (4)October (18)September (9)August (3)July (8)June (10)May (5)April (9)March (4)February (15)January (4)2011December (3)November (10)October (37)September (11)August (20)July (29)June (21)May (81)April (32)March (42)February (46)January (64)2010December (22)November (14)October (16)September (18)August (27)July (18)June (21)May (24)April (14)March (33)February (41)January (33)2009December (52)November (42)October (26)September (28)August (29)July (27)June (23)May (28)April (24)March (34)February (49)January (53)2008December (72)November (54)October (72)September (41)August (26)July (43)June (21)May (19)April (11)March (19)February (7)January (21)2007December (27)November (40)1999November (13) Welcome toMyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals